दैनिक मजदुरी गरि गुजारा चलाउँनेलाई अभिभावकत्व दिनु सरोकारवाला र राज्यको दायित्व होइन र ? – Glammandu Online
kusum	 Mar 31, 2020
छिमेकी देश चीनको वुहानबाट उत्पत्ति भएको कोरोना भाइरस फैलिएर संसार आतंकित छ । अझ कति दिन के हुँने हो ठेगान छैन । बेलुका सद्दे सुतेको मान्छे बिहान कहिल्यै नब्युँझने चिर निद्रामा डुब्नेहरूको संख्या दिनानुदिन बढेको बढेकै छ । यता हाम्रोमा दस बर्षे गृह युद्ध, हाम्रो जीवनकालको सबभन्दा ठूलो विपत्ति र महाविनासले थिलथिलो देश बल्लतल्ल तंग्रिदै थियो । जनतामा शान्ति र समृद्धिको आशा जागेको थियो। देश समृद्धिको यात्रामा बामे सर्न शुरू गरेको थियो । अहिले हाम्रो देश पनि थला पर्दै छ । भूमण्डलीकृत विश्वमा एक्लो टापु बनेर बाँच्न नेपाललाई पनि सम्भव छैन ।
शक्तिराष्ट्रहरू संसारमा आफ्नो साम्राज्य कायम गर्न कमजोर राष्ट्रहरूमाथि बम बर्साइरहेका थिएँ । विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग मानवजातिको हितमाभन्दा नरसंहारकारी युद्धमा लगाइरहेका थिएं। संसार तमासे बनेर हेरिरहेको थियो । शक्ति राष्ट्रका शासकहरूको आफ्नो राष्ट्रलाई “महान” बनाउने होड बढ्दै जाँदा कतै तेस्रो विश्वयुद्ध त हुने होइन ? सम्झँदा पनि कहाली लागेर आउँछ ।
बदलाभावले परिवार, समाज, देश कहिँ पनि शान्ति ल्याउँदैन । बदलाभावको अनिबार्य परिणती हत्या, हिंसा र द्वन्द नै हो । के हामी फेरि अर्को द्वन्द चाहन्छौं ? पक्कै चाहँदैनौं । हामी चाहन्छौं- एकता, शान्ति र समृद्धि ।
कुरा सुरुवात गर्छु है त ।
हिजो एउटा अनलाइनमा आँखा दौडाउँदै थिएँ म । एउँटा भिडियोमा गएर टक्क रोकिए म । हेर्दा हेर्दै आँखाका खोचहरु आँशुले भरिएर आएँ ।
प्रिय पाठकहरू ! तपाईंहरूले पनि पढ्नु भयो होला यो हृदयविदारक खबर । दुई दिन देखि खान नपाएर आँखाबाट साउन उराल्दै दिएको बयानले के तपाईंको छाती चिरिएन ? आँखामा सागर र मुटुभित्र सुनामी उर्लिएन ? मलाई त सहन निक्कै गारो भयो । पटक-पटक भक्कानिएँ । साँच्चै विछिप्त नै भएँ म त ।
संसार कोरोना विरुद्ध लडिरहेको छ। बिगत ८ दिन देखि luck down मा छौ हामि । यस बिषम परिस्थितिमा समाजको सबभन्दा पिँधमा रहेको बर्गहरुलाई बिहान काम गरेर साझ गुजारा टार्न मुस्किल हुनेहरुको स्थिस्ती कति भयावह होला कल्पना गर्नुस त ।
सबैलाई थाहा छ- मृत्यु शास्वत सत्य हो । र यो पनि सबैलाई थाहा छ कि, मृत्यु स्वीकार गर्न साह्रै कठीन हुन्छ । सहर, बजार, रोड सबै सुनसान छ । तर १७ जाना युवा सडकको किनाराबाट हिडिरहेका छन् । ज्यान हत्केलामा राखेर । उनिहरुलाई कोरोनाबाट बाँच्नु र बचाउँनु भन्दा पनि भोकमरी बाट बच्नु छ र हिजोदेखि लगातार हिडिरहेका छन् ।
“धुलिखेलमा काम गर्थेउ । यत्रो दिन भयो काम बन्द भएको । भोक भौकै छौं । खान पाइएन । भोकले मर्ने भइयो । अब घर जान लाग्दैछौ । सायद ४ दिनमा त पुगिन्छ होला बारा । गाउ -घरमा मागेर पनि पेट भरिन्छ यहाँ त भोकै मरिने भयो हजुर हामिलाई घर जान दिनुस, हामि रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने भयौं।“ भनेर प्रहरी मिडियाकर्मि सँग अनुनय बिनय गरिरहेका हुन्छन् ।
बाँच्न पाउनु मान्छेको नैसर्गिक अधिकार हो । हाम्रो संविधानले स्वास्थ्यलाई मानवअधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
यस्तो बिषम परिस्थिमा उनिहरुको रेखदेख र खानपान गर्नुको दायित्व सरोकारवाला को हैन ? लकडाउन कति लम्बिन्छ- यकिन छैन । दैनिक मजदुरी गुमिसक्यो, उनिहरुको खाद्यान्नको ब्यवस्था, र उनीहरूलाई घर फर्काउनु पर्ने दायित्व राज्यको होइन ? आज हामीले कोरोना महामारीको बिरूद्ध लड्ने साहस गरेनौं भने भोलि स्वस्थ समाज निर्माण गर्न सक्छौ ?
थाहा छ मलाई, यसबेला उहाँहरु असह्य पीडामा हुनुहुन्छ । भावबिह्वल हुनुहुन्छ । बिछिप्त हुनुहुन्छ । बर्गीय हिसाबले पीँधमा परेकाहरू, जातीय हिसाबले दलितहरू यस अबस्थामा प्रताडीत छन् । तुलनात्मक रूपमा अत्यधिक गरिबी, बेरोजगारी, अभावग्रस्त, शोषित एवं उत्पीडित जीवन जीउन विवश ब्यक्ति खोजि खोजि सरण दिनु पर्दैन र ? सरकारले पनि जनताले बुझ्ने भाषामा केही बोलेको छैन । के यसरी मौन रहनु मिल्छ ?
अब प्रश्न उठ्छ, यी सबै जिम्मा कसले लिन्छ र कहिले हुन्छ ? हो, सबै आ-आˆनो ठाउँमा जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्ने यहीँनेर हो । यसको सबभन्दा मुख्य जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । किनकि, राज्य भनेको सबैको अगुवा र अभिभावक हो । समृद्धिका नाममा अविकासको विकास र गरिवी जाल सिर्जना नहोस् ।
आलोचना गरेर अरूको उछित्तो काढ्न निक्कै सजिलो हुन्छ । तर, त्यही कुरा आफ्नो जीवनमा लागू गर्न निक्कै कठिन हुन्छ । समाजमा ज्ञान र बिज्ञानको प्रयोग गरौं । इतिहासको गर्भबाट नै वर्तमानको जन्म हुन्छ । तसर्थ, इतिहासविना वर्तमान सम्भव छैन । इतिहासबाट सिक्न नचाहने प्रवृत्तिले अन्तत सम्म भविश्यप्रति न्याय पनि गर्न सक्दैन । नयाँ पुस्ताको नाममा के हामी भविश्यमाथि अन्याय गर्न चाहान्छौं ?
साँच्चै भन्ने हो भने मातृ ऋण चुकाउन संभव छैन । सायद त्यसैले होला, हामी आफ्नो देशलाई पितृभूमि नभनेर मातृभूमि भन्छौं । हाम्रा लागि माता तथा मातृभूमि समान महत्वको हुनाले आफ्नी आमालाई र मातृभूमिलाई उत्तिकै सम्मान गर्छौं ।
आज हाम्रो मातृभूमि पनि संकटमा पर्दै गइरहेको छ ।
यतिबेला हाम्रो राष्ट्रलाई हाम्रो जरुरत परेको छ। अगिपछी घरझगडा हुनु सामान्य नै हो जब सत्रुहरुले आक्रमण गर्न थाल्छन् तब घरपरीवार र भाईहरु नमिल्नुको बिकल्प हुदैन। आउनुहोस यस कठिन बेलामा सबै मिलेर अगाडि बढौं।
यसर्थ कोरोना नियन्त्रण नहुन्जेल कोरोना विरुद्ध युद्धको घोषणा गरेर सरकारको अगुवाइमा राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, गैरसरकारी क्षेत्रलगायत सबै निकाय र क्षेत्रहरू एकताबद्ध भएर लाग्न जरुरी छ ।
अन्त्यमा ,सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र सरकार निर्माणको अंकगणित भावी प्रधानमन्त्रीज्यू, कृपया हिजो तपाईँहरूलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर बिजयी गरी पठाउने जनताहरु भोकमरीमा पिल्सिएर जीवन गुमाउँन बाध्य हुनेछन् । दसऔंला जोडी बिन्ती छ- तपाईँहरू सबै मिलेर निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँच्न विवशको जीवन बचाउनुस् ।
नेतागण ! अब हामीलाई सस्तो सपना होइन, सधैं वास्तविक विपना चाहिन्छ। कृपया ! राष्ट्रवाद, राष्ट्रघात, पुँजिवाद, समाजवाद, साम्यवाद विभिन्न वादका नाममा आरोप-प्रत्यारोप र झगडा गर्न बन्द गर्नुस् । देश र जनताको पक्षमा काम गर्नुस् । हामी सदैव तपाईहरूकै साथमा हुनेछौं ।
Glammandunepali newsnepali news portalNepali online newsonline khabaronline newsonlinekhabaronlinekhabar news